Anọ Solutions I Kwesịrị Ịmara ndabere gị Photos ka ígwé ojii.
1.Backing gị Photos ka iCloud
2.How aka iCloud foto iyi na gị iPhone
3.How aka iCloud Photo Library on iPhone
4.Other mfe ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Photos ka ígwé ojii
Ọ dị mkpa n'ezie ka ndabere gị photos bụrụ na ngwaọrụ gị Nwela mebiri emebi, efu, ma ọ bụ furu efu ma ọ Nwela zuru. Ị na-achọghị ka ida gị weghaara echeta gị iOS ngwaọrụ. Data na-agbasa n'ebe nile gị iOS ngwaọrụ. Nke a ka e mere mfe na enyemaka nke iCloud, ma ọ bụ na ị nwekwara ike mfe ndabere gị foto gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka ka gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa na enyemaka nke iTunes. Otú ọ dị na iCloud ị nwere gị ókè, na free nchekwa bụ banyere 5 GB nke e nyere ikike t ọ bụla iOS ọrụ free nke na-eri onye nwere ihe Apple ID. Nke a nchekwa abịa kemfe mgbe i nwere ọtụtụ iOS ngwaọrụ na ị na-eji iCloud ugboro ugboro ka ndabere gị akwụkwọ na ozi ịntanetị.
Part 1 akwado gị Photos ka iCloud
Site na iji iCloud Photo Library, ị ga-esi ike weghara na-echekwa niile nke foto na iCloud na-enweghị ọ bụla ókè, n'adịghị ka Photo Stream nke e nwetara ebe aga afọ. Dị ka ogologo oge na iCloud nchekwa dị, iCloud Photo Library nwere ike ịzọpụta niile nke gị dị oké ọnụ ahịa ma dị ebube oge. Otú ọ dị, ọ dị mgbe ị na-eche ihe n'ihi nke enyere Photo Stream bụ?
Tupu na-akpụ akpụ na ka anyị hụ ndị isi iche n'etiti Photo Stream na iCloud Photo Library. Na nke ugbu a oge iCloud Photo Library a ka na-arụ ọrụ n'elu na bụ na beta ụdị; Otú ọ dị mgbe eji ọrụ a ọ bụ a nkwanye ndabere gị foto, nke na ị nwere atụmatụ ụlọ ahịa.
N'okpuru ebe a bụ tụnyere n'etiti Photo Stream na iCloud Photo Library:
Ọ nwere ike ịzọpụta gị kasị 1000 na-adịbeghị anya foto ma ọ bụ oyiyi nke ikpeazụ ụbọchị iri atọ
Ọ na-adịghị ahu nagide iCloud ohere
Ọ bụ dakọtara na ihe nile nke iOS ngwaọrụ nke na-agụnye iPod, iPhone, PC na Mac.
Ọ na-azọpụta web version nke foto, nke nwere ike ibelata àgwà
Ọ na-apụghị mmekọrịta na bulite videos
Ọ nwere ike na-mmekọrịta albums na foto site na PC gị ma ọ bụ Mac site iTunes mgbe ọ bụla ndị Photo Stream na-nyeere
Azọpụta gị onye video na foto, nke na-adịghị ọ bụla ókè dị ka ogologo oge na iCloud ohere bụ dị ka ụlọ ahịa.
Eme ka eji iCloud Nchekwa
Easy iji nweta on iPad, iPhone, na kwa site iCloud.com
Ọ nwere ike ịzọpụta ndise ke High Definition (HD) àgwà na ngwaọrụ gị na ihe nkesa na-. Ọzọkwa o nwere ọtụtụ formats dị ka TIFF, GIF, Raw, jpg na ndị ọzọ
Ọ nwere ike na-mmekọrịta videos na bulite foto
Otú ọ dị ị na-adịghị ike na-mmekọrịta albums na foto ndị si PC ma ọ bụ Mac na iTunes mgbe ọ bụla ị na-eji iCloud Photo Library, na kwa ọ bụla albums nke adị ga-enweta wepụrụ mgbe ọrụ ego n'anya nyeere.
Part 2 Olee aka iCloud foto iyi na gị iPhone
Na Photos ngwa nke iPad na iPhone, Photo Stream dị. Nke a na-ewere dị ka a akụkụ nke iCloud nke syncs foto n'oge ọ bụla na mgbe ọ bụla ya Nwela jikọọ na Ịntanetị site na Wi-Fi. Aka Photo Stream-eso nzọụkwụ kwuru n'okpuru ebe a:
1. On gị iPad ma ọ bụ iPhone pịa Ntọala
2. Launch iCloud si n'ebe
3. Ugbu a, enweta Photos
4. N'okpuru ebe ngalaba nke Photos, na-a ego na My Photo Stream na-nyeere
5. Photo nkekọrịta nwekwara ike nyeere si ihuenyo n'okpuru si ebe ị pụrụ ime ka a foto iyi ịkọrọ ndị ọzọ.
Nkebi nke 3 Olee otú aka iCloud Photo Library on iPhone
Iji jiri iCloud Photo Library na gị iPod ma ọ bụ iPhone, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Pịa Ntọala on iPhone
Pịgharịa na ẹkedori iCloud
Bugharịa ala na anya n'ihi na "Photos" na enweta ya
4. Ugbu a enyere ndị iCloud Photo Library si n'ebe
Nkebi nke 4 Ndị ọzọ mfe ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Photos on iPhone
E wezụga iCloud, e nwere ụzọ ndị ọzọ na-ndabere gị photos, n'etiti ha na-agụnye Dropbox na Flickr.
Dobe igbe na-enye 2GB nke ohere nchekwa nke bụ free ka ya ọrụ. Otú ọ dị, ohere nke nwere ike dịkwuo dabere na size gị mkpa. Ngụkọta ọ na-enye 500 GB nke ohere na adịchaghị udu.
Otú ọ dị nkwado ndabere na mpaghara photos site Dropbox-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Wụnye na Download Dropbox Ngwa nke dị free nke na-eri na App Store
Mepụta akaụntụ gị, nke bụ free
Si n'ụlọ gị na ihuenyo ẹkedori Dropbox App
Na ihuenyo ebe ọ na-ekwu "Igwefoto Bulite", bulie "Naanị Wi-Fi" na-enyere na nhọrọ. Iji na-enye Dropbox na ohere nke gị igwefoto ekwe, mgbata "Ka"
Ugbu a na unu niile bụ njikere ndabere gị photos.
Nke a bụkwa a ígwé ojii ọrụ nke na-awa site Flickr ebe foto na-ntabi kwadoo site iPhone. Ọ na-enye 1TB nke ohere nke bụ nnọọ free. Nkwado ndabere na mpaghara Photos-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Open App Echekwala na Download Flickr App
Ugbu a ike gị na akaụntụ, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye ẹdude ọrụ nanị nbanye
Na ala nke ihuenyo enweta igwefoto ekara icon
Họrọ foto na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara
Ugbu a na unu niile bụ njikere bulite na nkwado ndabere na mpaghara
Na-The Hackers 'aka Off Your iCloud
Olee otú ka Wepụ iOS ngwaọrụ site na iCloud na Chọta My iPhone
> Resource> iCloud> anọ ngwọta i kwesịrị ịma ka ndabere gị foto ígwé ojii.